Semalt: Ahoana ny fiasan'ny wiki amin'ny fiteny samihafa?
Oliver King, ny Semalt Mpanantanteraka Success Manager, dia milaza fa manana tahirin-kevitra, lahatsoratra ary votoatiny amin'ny fiteny samihafa ny Wikipedia, ary ireo mpampandrosana dia ampirisihina hamorona lahatsoratra tsy hita ao amin'ity rakibolana goavana ity . Azo antoka ny filazana fa misy amin'ny fiteny maherin'ny telonjato ny Wikipedia, saingy ny ankamaroan'izy ireo dia tsy ampy sy kely. Ny olona avy amin'ny faritra rehetra manerana izao tontolo izao dia mitsidika ny Wikipedia isan'andro ary mamaky ny edisiona amin'ny fiteny 300 mahery. Ny sasany amin'izy ireo dia mikaroka lahatsoratra sy votoatiny manokana nosoratan'ireo mpanoratra an-jatony an'arivony izay tompon'andraikitra amin'ny fananganana sy fitazonana ity rakipahalalana malaza sy maimaim-poana ity. Ny mpitsidika ny Wikipedia dia mitady ny lahatsoratra amin'ny teny Anglisy, ary ny tenim-pirenena hafa dia mirakitra fidirana 30 tapitrisa Wiki.
Demokrasia ny fahazoana ny fahalalana
Mba hanampiana ireo mpanoratra sy ireo tonian-dahatsoratry ny vondrom-piarahamonina maro samihafa hanombana ireo lahatsoratra tsy hita, ny manam-pahaizana momba ny solosaina ao amin'ny Wikimedia Foundation sy Stanford dia namorona fitaovana sasantsasany. Ny iray amin'izy ireo dia manampy amin'ny fametrahana ireo lahatsoratra manan-danja izay tsy mbola misy amin'ny fiteny iray manokana. Ireo mpampiasa dia mampiasa ireto fanolorana ireto mba hamoronana lahatsoratra vaovao. Raha mpanoratra marobe ny mpanoratra ary mpanoratra dia mora ny mahita lahatsoratra amin'ny fiteny faharoa ary mandika izany amin'ny fiteny eo an-toerana ho an'ny mpamaky Wikipedia.
Noho izany, ity rafitra ity dia hamantatra voalohany ny tonian-dahatsoratry ny Madagasikara izay maniry hanoratra amin'ny teny Frantsay ary hangataka ny tonian-dahatsoratra hamitana ny ampahany tsy hita ao amin'ny lahatsoratra ary mamoaka izany amin'ny Wikipedia amin'ny teny malagasy. Afaka mamorona lahatsoratra ho an'ny olona samihafa eto amin'izao tontolo izao ireo mpandrindra, izay mety hanan-kery eo amin'ny traikefan'ny mpampiasa.
Niara-niasa tamin'ny mpianatra Stanford University Robert West ny mpikaroka momba ny Fondation Wikimedia, Leila Zia sy Ellery Wulczyn, mba hanolotra tatitra ao amin'ny International World Wide Web Conference, Montreal. Araka ny filazan'izy ireo dia manana tahiry betsaka ny Wikipedia, ary misy fifandraisana matanjaka eo amin'ireo lahatsoratra ao aminy.
Nanomboka nanangana ny lisitry ny lahatsoratra amin'ny fiteny samihafa ireo mpahay siansa ary manondro ny lisitra mba hahafantarana hoe iza amin'ireo lahatsoratra ireo no tsy misy fiteny. Avy eo dia nanombatombana ny lanjan'ny lahatsoratra tsy hita popoka mifototra amin'ny lanja ara-jeografika sy ara-kolotsaina. Tian'izy ireo hamoaka ireo lahatsoratra tsy hita isa haingana araka izay azo atao sy hahazoany toerana tsara kokoa.
Fametahana ny banga
Nandinika ny toe-javatra ny mpikaroka tamin'ny alalan'ny fanandramana samihafa. Nanomboka ny tetikasa miaraka amin'ny lahatsoratra 4 tapitrisa mahery izay nosoratana tamin'ny teny anglisy ary nahitana fa lahatsoratra tsy mihoatra ny 1.5 tapitrisa no tsy hita ao amin'ny fizarana frantsay. Nofintinin'ireo manam-pahaizana avy eo ireo lahatsoratra manan-danja amin'ny teny anglisy izay 300 000 ary nandika izany tamin'ny teny frantsay. Ireo lahatsoratra dia nizara ho andiany telo lehibe ahitana lahatsoratra 100 000 mahery ary natolotra ny mpamoaka lahatsoratra tsara indrindra sy za-draharaha. Ny vondrona mpikatroka dia nahitàna vondrona lehibe roa tamin'ireo tonian-dahatsoratra enina enina enina sy mpanoratra izay nanao fanovana maromaro tamin'ny fiteny frantsay sy anglisy tamin'ny roa ambin'ny folo volana talohan'ny nahitana ny fanandramana. Tamin'ny Jona 2015, nahitàna mailaka nanondro ireo lahatsoratra tsy misy fanovana ireo mpamoaka lahatsoratra rehetra, ary nangatahana izy ireo handika ny lisitra feno amin'ny lahatsoratra amin'ny teny Anglisy amin'ny teny Frantsay. Iray volana taty aoriana, ireo tompon'andraikitra dia nahatratra ny fananganana lahatsoratra tsy hita popoka ary nahita fa afaka mampitombo ny tahan'ny fananganana lahatsoratra momba ny famoronana. Noho ireo vokatra rehetra ireo, ny Fondation Wikipedia dia nanamboatra fitaovana fanandramana izay ahitan'ny mpanoratra sy mpanoratra ny banga amin'ny tenim-paritra misy azy ireo ary manondro ny fidirana manokana Source .